एक कांस्य तन कसरी प्राप्त गर्ने? यो मुद्दा धेरै fashionistas र सुंदरियों गर्न चासो छ। महिला एक विशाल संख्या एक धूपघडी तयार prolezhivat घण्टा, बस सुनको तन प्राप्त गर्न। सेतो छाला र त्यसपछि वोग मा, केही महिलाहरु बस तपाईं एउटा सुन्दर तन लागि लड्न सक्दैन कसरी बुझ्न छैन भन्ने तथ्यलाई बावजुद। धेरै बालिका को हिउँदमा त्यहाँ फेला पार्न, तर धूपघडी जान कुनै अन्य तरिका हो कि जस्तो लाग्छ। निस्सन्देह, तपाईंले ट्रपिकल देशहरूमा यात्रा गर्न वित्तीय क्षमता छैन भने, समुद्र वा एक हप्ताको लागि सागर अप तातो बालुवा भिजेको गर्न।
डाक्टर अनुसार, सामान्य मा धूपघडी पैदल यात्रा गर्न धेरै सुरक्षित सोख हो। त्यसैले, तपाईं एक कांस्य तन को अधिग्रहण मार्फत अन्यसँग आफैलाई familiarize गर्न सक्नुहुन्छ? यसलाई - bronzaty। यी पोंछे रवि, पाउडर, विभिन्न क्रीम र avtobronzaty समावेश गर्नुहोस्। का थप विस्तार हेर्न यी विकल्पहरू प्रत्येक गरौं।
का एक सरल सुरु गरौं। एक रात आफ्नो छाला सुन्दर तन, इच्छित छाया दिन को लागि पाउडर सक्षम छ। साथै, यो लुकाउन हुनेछ गाढा स्थलहरू, र अनुहार स्वस्थ नजर दिन थकान को संकेत। पाउडर तन संग विशेष प्रभाव Pigments समावेश गर्दछ। organically यसलाई को अनुहार मा हेर्न, निर्माता मोती को mikroenzimy, चिन्तनशील कणहरु र आमा मा थप गर्नुहोस्। जो घटक आफ्नो पाउडर कुरा छैन छ, त्यो एक रेशम बनावट थियो कि मुख्य कुरा। यस्तो सुविधा मात्र आफ्नो अनुहार मा लगभग unnoticeable हुनेछ र pores clog छैन। थप संतृप्त रंग प्रशंसक मुलैटो टोन वा मइस्चराइजर गर्न पाउडर राख्दै हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। जो jojoba तेल, बदाम र अर्क ginseng बीउ, मकै, भिटामिन र एसपीएफ-फिल्टर को एक किसिम छ एक भागको रूपमा, यस्तो उपकरण किन्न सर्वश्रेष्ठ ठाउँ। यस्तो कस्मेटिक्स मात्र छाला एक आभा दिन छैन, यो rejuvenate र moisturize, अप्रिय चिल्लो लागेको चमक हटाउनु, तर पनि हानिकारक सूर्य रेज सुरक्षा।
निम्न bronzaty - यो क्रीम। तिनीहरूले सुक्खा छाला संग बालिका गर्न अनुकूल छन्। तिनीहरूले जग जस्तै सिद्धान्त मा लागू छन्। को bronzata-क्रीम को प्रभाव अलिकति अब पाउडर भन्दा आयोजित गरिनेछ। तपाईँले एक दिन एक तन प्राप्त। र सबै किनभने यी धन को एक भाग पदार्थ समावेश सजिलै, धोएका छन् पानी संग सम्पर्क। र तपाईं वर्षा अन्तर्गत पर्न वा शवर मा जान आवश्यक छैन। यो मानिसको अनुहार पसिना र पसिना ढाकिएको छ, त्यसैले क्रीम कहिलेकाहीं अप्रत्याशित छ। यो आवश्यक छैन तपाईं एक पक्ष वा एक रात क्लब जान जाँदै हुनुहुन्छ भने यस्तो bronzatom प्रयोग छ। आखिर, तपाईं शायद पसिना हुनेछ।
धेरै दिनको लागि रहन्छ जो को प्रभाव मतलब, यो छ - avtobronzat। यो एउटा निकाल्ने समावेश उखु, छाला को शीर्ष तहमा रूपमा आवश्यक कार्य जो। केही दिन: त्यहाँ दुई प्रकारका छन् avtobronzatov सुनको-कांस्य रंग , 5-10 मिनेटमा अरूलाई कार्य ढिलाइ गरेको छ। त्यसैले, दोस्रो समूह को इच्छित छाया5दिनको लागि कम से कम प्रयोग गरिनुपर्छ प्राप्त गर्न। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा निर्देशनहरू पालना avtobronzatov लागू गर्दा। यो यस्तो दाग र यस्ता खराब नतिजा जोगिन मदत गर्नेछ अनुहार मा स्पट।
पट्टियां रवि - कम्तिमा एक हप्ता पीतल को छाला टोन बचत गर्न निश्चित तरिका हो। तिनीहरूले एक विशेष लोशन, Tinted छाला संग गर्भवती छन्। पट्टियां रवि अक्सर छैन केवल Pigments समावेश तर पनि निकाल्छ घ्यु कुमारी, को भिटामिन, Shea घिउ र यति मा। तसर्थ, छाला सबै आवश्यक पोषण र hydration प्राप्त गर्दछ। पट्टियां रवि पनि प्रयोग गर्न धेरै सजिलो छ। तिनीहरू केवल परिपत्र गति मा अनुहार मा आयातित र मालिश गर्न आवश्यक छ।
कांस्य छाला - यो एक वास्तविकता छ। मुख्य कुरा आफ्नै, तपाईंको जोखिम समयको लागि आदर्श चयन र आवेदन हालतमा को सुख छ।
कसरी लोकप्रिय तरिका को अनुहार देखि तन हटाउन
घर मा समस्या छाला हेरचाह
उनको घाँटी मा टाटु - एक आभूषण वा चुनौती?
सौन्दर्य पाठ: बिकनी क्षेत्र मा कपाल हटाउन
टैटू निको कति लामो हुन्छ? क्यान्सरको समय निर्धारण गर्छ?
जोइस्टिक डिफेन्डर कोबरा M5: वर्णन, अनुकूलन, समीक्षा र मालिकको समीक्षा
चोट अन्तस्करणले - शरीर मा समस्या को एक लक्षण
कामुक चित्रकारी: रंग र क्यान्सरहरूमा नग्न शरीरहरूको एक सिम्फनी
धेरै निल्छ दर्दनाक, के गर्ने? तपाईं को लागि विकल्प बस धेरै!
ब्रेडक्रंब मा चिकन cutlets - सरल र स्वादिष्ट